Zvikumbiro zveiyo iPhone | IPhone nhau
MuApp Store mune zviuru zvekushandisa uye zvakaoma kwazvo kuwana imwe inokodzera zvauri kutsvaga kana iwe usingazive zita rayo. MuAppualidad iPhone isu tinokudzidzisa iwe mazuva ese zvakanyatsoshanda izvo zvinosunungurwa zveApple foni. Isu tichaonawo zvekuda kuziva uye zveinovhurwa maapplication iwe kuti iwe ugare uchishamisika nekushandisa iwe kwaunogona kupa kune yako iPhone. Iyo kuongorora uye kuongorora ivo vanozopinda mukudzika kwakanyanya kuitira kuti iwe uzive zvese zvinobvira zvekushandisa.
Kutanga kudhawunirodha mafomu eiyo iPhone yako
Kana iwe uchinge warasika uye uri mutsva kuApp Store, heano akanakisa emahara uye akabhadharwa maapplication aunogona kurodha pasi kune yako iPhone.
Nesarudzo iri pamusoro, iwe unowana zadza yako iPhone nemaapplication nyowani uye inonakidza.
Iwe unogona ikozvino kutamba Fortnite pane yako iPhone uye iPad nekuda kweGeForce Zvino
kubudikidza louis padilla inoita 26 mins .
Mushure memwedzi yakawanda kure neApple zvishandiso, Fortnite inodzokera ku iPhone uye iPad. Zvinoita thanks...
Apple ichabvumira vanogadzira kukwidza mutengo wekunyoreswa kwavo nemimwe miganhu
kubudikidza Karim Hmeidan inoita 4 mazuva .
Isu takatokanganwa asi makore mashoma apfuura pakanga pasina App Store kana chero application store. Nhasi…
WhatsApp inokutendera kuti usiye mapoka pasina kuzivisa vamwe vashandisi
kubudikidza Ngirozi Gonzalez inoita 4 mazuva .
Mazuva mashoma apfuura takadzidza kuti WhatsApp yaibatanidza mafirita ekutsvaga mubeta vhezheni yekushandisa kwayo...
Dzidza mitauro kubva kupi zvako uye nekumhanya kwako ne italki
kubudikidza Ignatius Room inoita 4 mazuva .
Hapana anogona kuramba kuti Chirungu chagara chiri mutauro wepasi rose, mutauro waunogona kuita kuti unzwisise ...
WhatsApp inotanga kuyedza mafirita mukutsvaga mubeta yayo
kubudikidza Ngirozi Gonzalez inoita 1 vhiki .
WhatsApp betas inogara ichivandudzwa. Masvondo mashoma apfuura maCommunities akaziviswa zviri pamutemo, pfungwa ye…
NapBot yeApple Watch inogadziridzwa pamwe nekuwedzera kwekuongorora kupnea kwekurara
kubudikidza Karim Hmeidan inoita Mavhiki e2 .
Zvakawanda zvakataurwa pamusoro pemikana yatinayo yekushandisa michina yakaita seApple Watch kutarisa kuti sei…
Teregiramu inogona kuwedzera ega mabasa pasi pekunyoreswa kwePrimum
kubudikidza Ngirozi Gonzalez inoita Mavhiki e2 .
Mameseji mameseji ndicho chingwa chemazuva ese pamidziyo yedu. Kuwedzera ivo chinhu icho ...
WhatsApp ichakurumidza kukubvumidza iwe kuti uone mastatus kubva kune chat tray
kubudikidza Ngirozi Gonzalez inoita Mavhiki e3 .
Muchina weWhatsApp unodarika mafuta. Izvo zvitsva zvinoenderera mberi mwedzi nemwedzi uye zvese zvakafanana…
Maitiro ekuwana iyo 1Password 8 yeruzhinji beta pane yako iPhone kana iPad
kubudikidza Ngirozi Gonzalez inoita 1 mwedzi .
Nezuro chaiye takakuudza kuti 1Password yakanga yaburitsa iyo huru yekuvandudza papuratifomu yayo kusvika parizvino. Ndezve…
Incredible 1Password 8 update ikozvino yave kuwanikwa muruzhinji beta
Kuchengetedzeka kwemaakaundi edu kwakakosha kuti ruzivo rwemushandisi wedu rwuve rwunoshamisa. Kuwedzera chiitiko ichocho…
Chii chitsva muWhatsApp: Nharaunda, mafaera anosvika 2 GB uye nezvimwe
WhatsApp ndeimwe yeanonyanya kushandiswa mazuva ese nevazhinji vevashandisi. Mumwedzi mishoma yapfuura…
Dzivirira WhatsApp kubva pakuponesa mifananidzo nemavhidhiyo kune yako reel
Zvese nezve mabhuru muTeregiramu
Maitiro ekuziva ndiani asina kunditevera pa Instagram
Iyo Pordede app (ikozvino Plusdede) inopinda muApp Store
Maitiro ekuwedzera mapikicha uye mavhidhiyo kubva kune reel kune yedu Instagram nyaya
Mitambo yakanakisa paApp Store
Maitiro ekutumira nziyo kana kusevha akagamuchirwa kubva kuWhatsApp
Maitiro ekudhawunirodha Facebook mavhidhiyo pane iPhone
Maitiro ekutenderera vhidhiyo pane iPhone
Maitiro ekushandura YouTube Mavhidhiyo kuita Mp3 ne iPhone
Iyo 8 yakanakisa Wallpaper maapplication eiyo iPhone
"Hei Siri" isiri kukushandira? Edza izvi mhinduro
Happy Chick, iyo All-in-One emulator yeIOS uye Android yauri kuda. [Kuisa dzidziso]
Isa (kutsemuka) kunyorera mu .ipa fomati
Tora Afterlight mahara neApple Store app. Tinokuratidza sei
Kufamba kwebasa: Chii icho, kuti inoshanda sei uye chii chandingaite nayo